को हुन् नवनियुक्त आइजीपी ठाकुर ज्ञवाली?
नेपाल प्रहरीको आइजिपीसँगै तीन एआइजी र १८ डीआइजीले अवकाश लिदै गर्दा ठाकुर ज्ञवाली प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ ।
मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
को हुन् आइजीपी ज्ञवाली?
प्युठानको साविक बादीकोट गाविस (हालको झिम्रुक गाउँपालिका–१) मा २०२२ असोज २८ गते बाबु नारायणप्रसाद ज्ञवाली र आमा सुमित्रा ज्ञवालीका माइला छोराको रुपमा ठाकुर ज्ञवालीको जन्म भएको थियो।
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएर गाउँले जनजीवनमा हुर्किनुभएका उहाँले प्रारम्भिक शिक्षाका साथै एसएलसी स्थानीय मच्छी माविबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। स्नातक सकेर प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँले २०४७ असार २५ गतेदेखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो।
जागिरसँगै पढाइलाई निरन्तरता दिँदै उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएका उहाँ संगठनमा इमान्दार र लो प्रोफाइलमा रहेर काम गर्ने अधिकृतका रुपमा चिनिनुहुन्छ।
हाइटी, पूर्वी टिमोर, कोसोभोलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका विभिन्न मिसनमा बसेर पनि सेवा गरिसक्नुभएका ज्ञवाली आइजीपी हुनुअघि प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।
सेवा प्रवेशको ११ वर्षपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा हुनुभएका उहाँ डीएसपी हुँदा बुटवल, अपराध महाशाखा लगायतमा रहेर काम गर्नुभएको थियो।
२०५८ वैशाख १८ गते डीएसपी, २०६६ मंसिर ३ गते एसपी, २०७३ असार २८ गते एसएसपी र २०७५ असोज २८ मा डीआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो।
एसएसपी हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र नेपालगञ्ज र बुटवल प्रहरी तालिम केन्द्रको नेतृत्व गरिसक्नुभएका ज्ञवाली एसपी हुँदा कर्मचारी प्रशासन शाखा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, दाङ र बारा, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको थियो।
ज्ञवालीको लक्की नम्बर २८
नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीको २८ अंकसँग अनौठो संयोग देखिएको छ। असोज २८ गते जन्मिनुभएका उहाँ एसएसपीदेखि आइजीपी हुँदासम्म सबै बढुवा २८ गते नै भएको छ। उहाँ एसपीबाट एसएसपी २०७३ असार २८ गते हुनुभएको थियो भने एसएसपीबाट डीआइजीमा बढुवा २०७५ असोज २८ मा हुनुभयो। यस्तै डिआइजीबाट आइजीपी पनि २०७६ माघ २८ मै हुनुभएको छ।
ज्ञवालीका सहकर्मी तथा सिनियरहरु पनि उहाँलाई इमान्दार, नैतिकवान र आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्ने अधिकृतका रुपमा चिन्ने गर्दछन्। प्रहरीका तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्मका सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र आफूले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्ने उहाँको स्वभाव रहेको उनीहरुको भनाई छ।
ज्ञवालीका कान्छा भाइ श्यामलाल ज्ञवाली पनि प्रहरी सेवामै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)का रुपमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय नगरेमा उहाँ अबको ५ महिना प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहनुहुनेछ। उमेर हद हटाएमा भने उहाँको कार्यकाल लम्बिनेछ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आएसँगै ज्ञवालीका अगाडि थुप्रै चुनौतीका चाङ लागेका छन्। ती चुनौतीहरुको सामना गर्दै संगठनलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउन ज्ञवाली कति सफल हुनुहुनेछ, त्यो हेर्नलाई केही समय पर्खिनैपर्छ।
शान्ति सुरक्षाको महसुस, प्रहरीप्रति आम नागरिकको भरोसा र प्रहरी संगठनकै शीर ठाडो बनाउनु त छँदैछ, खनाल नेतृत्वकै पालामा सुनकाण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड लगायतका अनुसन्धानमा खटिएका दर्जन बढी अनुसन्धान अधिकृतहरुमाथि नै गरिएको कारबाहीजस्ता घटनाले प्रहरी संगठनमा बढेको निरासालाई कसरी हटाउने भन्ने ज्ञवालीका अगाडि गम्भीर चुनौती रहेको छ।